Kayakairan Daily | कायाकैरन दैनिक || विशेषज्ञ चिकित्सकलाई नै डेंगे ! स्वास्थ्यकर्मी नै थलिएपछि उपचार प्रभावित – kayakairan.com
विशेषज्ञ चिकित्सकलाई नै डेंगे ! स्वास्थ्यकर्मी नै थलिएपछि उपचार प्रभावित
२७ भाद्र २०७६, शुक्रबार ०२:२३
भरतपुर, २६ भदौ
जिल्लामा भाइरल ज्वरो तथा डेंगेको संक्रमण बढ्दै जाँदा उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी पर्न थालेका छन् । चितवनका सरकारी तथा निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी नै बिरामी परेपछि उपचारमा समस्या पर्न थालेको छ ।
जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने कार्यालय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका कर्मचारीहरु नै डेंगेले थलिएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालयका दुई जना कर्मचारीलाई डेंगेसम्बन्धी सचेतना अभियानमा सहभागी हुने क्रममै डेंगे भयो । “अघिल्लो दिन नारायणगढ क्षेत्रमा सचेतना अभियानमा हिँड्नुभयो, भोलिपल्ट उहाँहरुलाई नै डेंगे देखियो”, स्वास्थ्य कार्यालयका एक कर्मचारीले भने । आफैंलाई डेंगे हुँदा पनि विदामा बसेर आराम गर्न नपाएको कार्यालयका कीट नियन्त्रक राम केसी बताउँछन् । धेरै जनतामा संक्रमण देखिएकाले यसको नियन्त्रणका लागि आफ्नो बिमारलाई भुलेर पनि काममा खट्नुपरेको उनले बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीलाई पनि भाइरल ज्वरोले सतायो । “ज्वरो आएपनि डेंगे परीक्षण गरिएन”, एक कर्मचारीले भने, “आफैंले जानेबुझेको औषधि खाएर काम गर्दैछौं ।”
केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा रहेको भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत आधा दर्जन बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई डेंगे तथा भाइरल ज्वरोले सुतायो । दुई जना चिकित्सकलाई डेंगे भयो । दुईमध्ये पनि एक जना त बिरामीको डेंगे र भाइरल ज्वरो नै परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ चिकित्सक हुन् । अन्य स्टाफ नर्स र कर्मचारीलाई पनि डेंगेले भेट्यो । “स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी पर्दा उपचारमा जनशक्ति अभाव भइरहेको छ”, अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा.श्रीराम तिवारीले भने, “तैपनि दिनरात खटेर सेवा दिइरहेका छौं ।”
अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी पर्दा उपचारका लागि कार्यतालिका मिलाउनै समस्या हुने गरेको छ । “कतिपय स्वास्थ्यकर्मी त आफैं बिरामी पर्दा पनि सकि–नसकि काममा आइरहेका छन्”, उनले भने, “अप्ठेरो परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ । केही दिन यस्तै अवस्था रह्यो भने गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।”
बिहीबार अस्पतालको बहिरंग विभागमा १ हजार ५ सयभन्दा बढीले टिकट लिएकोमा मेडिकल विभागका बिरामी मात्रै ५ सय ५० जना थिए । तीमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भाइरल ज्वरो र डेंगेका बिरामी रहेको पौडेलले बताए ।
जिल्लाको अर्को सरकारी अस्पताल बकुलहर रत्ननगर अस्पतालका दुई जना चिकित्सकलाई भाइरल ज्वरोले सुतायो । यहाँ डेंगे परीक्षण गर्ने ल्याब टेक्निसियनलाई नै डेंगे भयो । मेडिकल सुपरिटेन्डेण्टसहित तीन जना चिकित्सकको सरकारी दरबन्दी रहेको यस अस्पतालमा अहिले मेसु मात्रै छन् । निजीतर्फका अन्य तीन जना चिकित्सक कार्यरत छन् । अस्पतालको क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बिरामी आउने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन् ।
जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रमा हजारौं जनतालाई सेवा दिने माडी अस्पतालका दुईजना चिकित्सकलाई नै डेंगे संक्रमण देखिएको छ । माडी क्षेत्रमा ज्वरोको प्रकोप बढिरहेको बेला अस्पताल प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. आलोक कुमार आफैं डेंगेबाट थलिएका छन् । अर्का एकजना चिकित्सक पनि संक्रमित भएपछि विदामा छन् । अस्पतालले ३० जनाको डेंगे परीक्षण गरेकोमा १४ जनामा पोजिटिभ देखिएको छ । अस्पताललाई माडी नगरपालिकाले ५० थान कीट सहयोग गरेको छ ।
जिल्लाका मेडिकल कलेज तथा निजी अस्पतालहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । यी अस्पतालहरुमा बिरामीको संख्या अत्यधिक बढेका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको कामको चाप ह्वात्तै बढेको छ । कामको चापले स्वास्थ्यकर्मी नै बिरामी पर्ने अवस्था आएको अस्पताल सञ्चालकहरु बताउँछन् । केही स्वास्थ्यकर्मीहरु बिरामी परेर विदामा बसेपछि बाँकीलाई ‘ओभर टाइम’ काममा खटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
अस्पताल क्षेत्रमा हुने फोहर तथा पानी जम्ने खाल्डा–खुल्डीका कारण पनि रोगको जोखिममा स्वास्थ्यकर्मीहरु छन् । भरतपुर अस्पतालमा त लामखुट्टेको बिगबिगी नै छ । अस्पताल वरिपरिको वातावरण सफा राख्न विभिन्न क्षेत्रबाट दबाब दिइएपनि खासै प्रगति देखिँदैन ।
स्वास्थ्य कार्यालयले दिएको तथ्यांकानुसार चितवनमा कूल ५ हजार ३१ जनाको डेंगे परीक्षण गरिएकोमा १ हजार ५ सय ८७ जनामा संक्रमण भेटिएको छ । कूल संक्रमितमध्ये १ हजार १ सय ८४ जना भरतपुर महानगरपालिकाभित्रका छन् । राप्ती नगरपालिकाका ८, खैरहनीका १५, रत्ननगर नगरपालिकाका ६१, कालिकाका २०, माडीका १९ र इच्छाकामना गाउँपालिकाका ९ जनामा डेंगेको संक्रमण भएको भेटिएको छ । नवलपरासी जिल्लाका १ सय ७७ जनामा डेंगे भेटिएको छ । एक जना भारतीय नागरिकमा संक्रमण भेटिएको छ । भरतपुर अस्पतालपछि सबैभन्दा बढी डेंगेका बिरामी नारायणी सामुदायिक अस्पतालमा भेटिएका छन् । त्यसपछि चितवन मेडिकल कलेज, पुरानो मेडिकल कलेजलगायत अस्पतालमा छन् ।
विपद् कोषबाट कीट किनेर दिनूः प्रशासन
चितवन जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट डेंगे कीट खरिद गरी स्थानीय अस्पतालहरुलाई वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकले जिल्लामा प्रकोपको रुपमा देखापरेको डेंगेको परीक्षणमै वाधा उत्पन्न भएको कारण त्यसलाई सहज बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो । अहिले जिल्लाका सबैजसो क्षेत्रमा डेंगेको संक्रमण देखिएको छ । तर, हरेक सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था कीट अभावबाट गुज्रिरहेको छ । यही अभाव कम गर्न समितिले कोषमा रहेको रकम सदुपयोग गर्न भनेको हो ।
समिति संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीतेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विपद्कै रुपमा फैलिएको डेंगे संक्रमण नियन्त्रण गर्न आवश्यक निर्णय र प्रयास गर्न भनेको छ ।
माहानगरपालिकाले बल्ल दियो कीट
चितवनमा डेंगेको प्रकोप देखिएको झण्डै एक महिनापछि बल्ल महानगरपालिकाले कीट सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले दिएको डेंगे परीक्षणको कीट साउनको पहिलो सातामै सकिएको थियो । लगत्तै भरतपुर अस्पतालले महानगरपालिकासँग कीट सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले करिब तीन हप्तापछि बिहीबार मात्र एक हजार थान कीट उपलब्ध गराएको छ ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट करिब पाँच सय थान कीट अस्पताललाई प्राप्त भएको थियो । “महानगरको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म सहयोग गरिरहेका छौं”, कीट हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर रनु दाहालले भनिन्, “कीटका लागि गरिएको प्रयास बल्ल सफल भयो ।” यसअघि पनि डेंगे नियन्त्रणका लागि ¥याली, अन्तरक्रियालगायतका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएपनि महानगरपालिकाले ‘केही गरेन’ भनेर आलोचना गरिएको भन्दै उनले गुनासो गरिन् ।
कार्यक्रममा महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखाका हेल्थ असिस्टेन्स अधिकृत सूर्य तिवारीले डेंगे कीटको उपयोग अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मात्रै गरिए अभाव नहुने बताए । उक्त अवसरमा मेयर दाहालले भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. श्रीराम तिवारीलाई कीट हस्तान्तरण गरिन् । कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारीले सचेतना अभियानै डेंगे नियन्त्रणको प्रमुख उपाय भएको बताए । महानगरपालिका कार्यालयले जनस्वास्थ्य शाखाको भैपरी आउँदा प्रायोग गर्न छुट्याइएको रकमबाट दुई लाख र बाँकी अन्य कार्यक्रमबाट एक लाख रुपैयाँ गरी तीन लाख रुपैयाँ मूल्यको कीट अस्पताललाई प्रदान गरेको हो ।
पटिहानीमा पुरुष भलिवल सुरु, उद्घाटन खेलमा आयोजक पद्मोदय क्लव विजयी
कार र्‍यालीको औचित्य के ?
२०७६ फागुन ९ गते शुक्रबार
प्राविधिक शिक्षालयमा पूर्वाधार थपिँदै